Lenovo mara ọkwa na Moto Z, ọnụ ya iji dochie Moto X | Gam akporosis
Lenovo gosipụtara Moto Z nwere ihuenyo 5,5 ″ AMOLED Quad HD, Snapdragon 820 na 4GB RAM
Lenovo na-aga maka ihe niile na usoro Moto na o nwere na anyị anọwo na-ahụ na izu ndị na-adịbeghị anya ọtụtụ nkwụsị na-eduga anyị kpọmkwem ruo taa nke, na-abụghị mata ekwentị Tango ọhụrụAnyị na-aga n'ihu na mgbakwunye abụọ Moto. Nke mbụ bụ Moto Z.
Site na Moto Z, nke Lenovo gosipụtara ugbu a, anyị gbanwere Moto X site na iji ụdị modular nke LG G5, nke anyị mere nyocha ụnyaahụ. A smartphone nke na-apụ apụ maka 5,5 ″ AMOLED Quad HD ihuenyo, ya Qualcomm Snapdragon 820 mgbawa na ebe nchekwa 4 GB nke RAM nke ọ ga-enwe obi ụtọ na nnukwu akụkụ nke ndị ọrụ na-abịa ịzụta ha.
Site na imepụta aluminom na-eso usoro ndị dị ugbu a, Moto Z pụtara nnukwu okirikiri oghere nke igwefoto azụ na-ewere dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo enyere. A ghaghị ịtụle otu n'ime àgwà ya bụ isi na modular. O nwere ngwa ndị ọzọ ejiri magnets jikọọ ma gụnye SoundBoost Mod, ọkà okwu na mpụga site na JBL, Mod Power Power, mgbakwunye batrị 2.200 mAh na Mod Insta-Share, dịka ụdị projector.
Moto Z nkọwa
5,5-anụ ọhịa AMOLED Quad HD ngosi (2560 x 1440)
32/64 GB nke nchekwa dị n'ime ya nwere ike ịgbasa site na microSD ruo 2 TB
Gụnyere gam akporo 6.0.1 ọ ga-abụ otu n'ime smartphones mbụ ịnata gam akporo N n'ihi ụdị akwa dị ọcha ọ na-enye ndị ọrụ. N'oge anyị amaghị ọnụahịa na nnweta, mana anyị ga-emelite tiketi ahụ ozugbo anyị nwetara ya. Ọnụ na-adọrọ mmasị nke anyị na-agaghachi na modular.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Lenovo gosipụtara Moto Z nwere ihuenyo 5,5 ″ AMOLED Quad HD, Snapdragon 820 na 4GB RAM
Maka nha ahụ na mkpebi ahụ, ọ kwesịrị ịbụ 4.000 mha opekempe